Tottenham oo Ka Badisay Kooxda Swansea City “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Swansea City ayaa waxaa garoonkeeda Liberty Stadium 1-2 uga badiyay kooxda Tottenham.
Kooxda Tottenham ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii afaraad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Harry Kane,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Marka la isku soo laabtay ciyaarta ayaa waxaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Swansea ciyaaryahan Wilfried Bony oo maanta kulankiisii 50-aad u saftay kooxda.
Ciyaaryahan Christian Eriksen ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Tottenham.
Kooxda Tottenham ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 24-dhibcood,halka kooxda Swansea City ay horyaalka uga jirto kaalinta 9-aad,iyadoo leh 22-dhibcood.
Villarreal oo Ka Badisay Kooxda Atletico Madrid